Leaderpromos.com မှကြော်ငြာများ - စျေး၊ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 9, 2011 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
ငါ့ခရီးစဉ်အဖြစ် Webtrends 2011 ခုနှစ်ဆွဲဆောင် ကွန်ဖရင့်သည်လာမယ့်အနေအထားတွင်၊ ကျွန်ုပ်ပွဲသို့ထုတ်လွှင့်ရန်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းအချို့ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့သည်။ ထိုအစီအစဉ်ကိုကမကထပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ရွေးချယ်စရာများအနက်မှတစ်ခုမှာတက်ရောက်သူများအားမှတ်စုတိုများကိုဖြန့်ဝေရန်ဖြစ်သည်။ သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒါကကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပါ။
ဘတ်ဂျက်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထိန်းညှိနိုင်ခြင်း၊ အခက်အခဲရှိသောပွဲတစ်ပွဲကိုမည်သို့ပံ့ပိုးနိုင်မည်နည်း။ တက်ရောက်သူများ တန်ဖိုးထား၍ တုံ့ပြန်မည့်လေးနက်သောရွှေဂုံတိုင်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေနိုင်မည်နည်း။ ငါ့အဖြေကိုရှာတွေ့လိုက်တယ် Leaderpromos.com။ မဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ကမကထပြု post ကို ချိတ်ဆက်ချိတ်ဆက်မှုချိတ်ဆက်မှုလည်းမရှိပါ။ အခွင့်အလမ်းပေးသောအခါကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုကြေငြာရုံသာကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
ကျွန်မတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်တွေပါတဲ့ဘောပင်တွေပါတဲ့ကြီးမားတဲ့ foldover notepads တွေ ၀ ယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါသူတို့ကိုမှာကြားခဲ့တယ်၊ အီးမေးလ်နဲ့အထောက်အထားမြန်မြန်ရခဲ့တယ်၊ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအမိန့်ပြည့်စုံခဲ့ပြီးဆန်ဖရန်စစ္စကိုကိုပို့လိုက်တယ်။ ငါထုတ်ကုန်ကိုတကယ်မမွငျခဲ့ဘူးကတည်းကငါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပတ်သက်။ တော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်သည်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြောင့်အရည်အသွေးမဖြစ်နိူင်သည်၊ ပို၍ ဆိုးရွားမည်ကိုကျွန်ုပ်စိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အားအချိန်မီမဖန်တီးနိုင်ပါ။
ငါတက်လမ်းလျှောက်အဖြစ် စီအီးအိုအဲလက်စ်ယိုဒါး အဲ့ဒီပွဲမှာငါကပွေ့ဖက်ခြင်းကြီးတစ်ခုနဲ့တွေ့ပြီးအေးမြတဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Awesome !!! ငါထိုင်ခုံကိုတွေ့လိုက်တယ်။ လူအများကြီး notepads တွေတက်နေတယ်၊ ​​လီဗာတွေနဲ့ကိုင်ထားတာတွေ၊ ပြီးတော့ပွဲမှာသူတို့ကိုသယ်ဆောင်ရတာငါဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူး။ သူတို့ကအရမ်းအေးလွန်းလို့ကျွန်တော့်ကို Webtrends ကိုရုံးခန်းကိုပြန်ပို့ခိုင်းတယ်။ သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်၊ ငါတို့ဒီနေ့ရတယ်။ (ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Webtrends!) ။
မှာရှေးရှေးမှအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Leaderpromos.com။ မှတ်စုစာအုပ်တွေကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ကျန်တဲ့အဖြစ်အပျက်အတွက်စီးပွားရေးကဒ်တွေအစားသူတို့ကိုငါပေးလိုက်တယ်။ (ကျွန်တော့်မှာစီးပွားရေးကဒ်ပြားတွေမရှိဘူး၊ မပြောရရင်အခြားအမည်မသိရောင်းချသူတစ် ဦး ကသူတို့နောက်ကျသွားလို့ပါ။ ) သင်ရပ်တန့်လျှင် Highbridge, တ ဦး တည်းဆုပ်ကိုင်သေချာပါစေ!
14:2011 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 26
အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ထုတ်ကုန်ရောင်းချသူ Stay Sourced သည် ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများအတွက် ထူးဆန်းပြီး အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အသုံးပြုမှုများကို ပြသသည့် eco-friendly ထုတ်ကုန်အမြောက်အမြားကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သင့်ကုမ္ပဏီသည် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီး ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အရောင်းအ၀ယ်အကြံဉာဏ်များကို ရှာဖွေနေပါက၊ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော တာယာများ၊ ဝါးဖောင်တိန်များ၊ ယိုယိုများနှင့် ခဲတံများမှ မောက်စ်ဖျာများနှင့် ကော်စတာများကို သွားကြည့်ရန် များစွာရှိသေးသည်။ ၎င်းတို့၏ ဂေဟစနစ်နှင့်လိုက်ဖက်ညီသော စုစည်းမှုတွင် စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး gadget မှာ အသင်းသားအချင်းချင်း စိတ်ဝင်စားစရာ ဆွေးနွေးမှုအချို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဘက်ထရီမပါသော၊ ရေအားသုံးနာရီဖြစ်သည်။ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အစုအဝေးတစ်ခုအတွက်၊ ၎င်းသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်နိုင်သည်နှင့် အများသူငှာ နယ်ပယ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အလိုမရှိသည့်အရာများအတွက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စိုးရိမ်စရာ ရှင်းလင်းချက်အချို့ရှိသည်။ ဒီအပေါ်မှာ အလင်းပေးနိုင်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ၊ အဂ္ဂိရတ်ပညာရှင် ဒါမှမဟုတ် ဗေဒင်ဆရာတွေရှိရင် ကျေးဇူးပြုပြီး မှတ်ချက်ပေးပြီး ငါတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကနေ လွတ်မြောက်ပါစေ။